घ्यू कुमारीको यी फाईदा थाहा पाएपछि तपाईं भन्नु हुन्छ :आहा घ्युकुमारी ! पढेर शेयर गर्नुहोस् – Sanchar Patrika
घ्यू कुमारीको यी फाईदा थाहा पाएपछि तपाईं भन्नु हुन्छ :आहा घ्युकुमारी ! पढेर शेयर गर्नुहोस्
July 17, 2020 191
एलोभेराको जुस एक हि’साबले शक्ति दिने पदार्थ हो । यसको नियमित प्रयोगले शरीरलाई दिनभर शक्ति प्रदान गर्छ र स्फूर्त राख्न मद्धत गर्छ । यसले रो प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बृद्धी गर्छ । एलोभेरा जुसले र’गतको कमीलाई पनि कम गर्छ । एलोभेराको ६ देखी ८ इन्च तासिएको टुक्रा, ५९७ वटा तुलसी’कोप पत्ता र ४९५ वटा नीमको पात लिएर थोरै पानीमा हालेर पिस्ने र यसलाई तातो काढाँ बनाएर पिउनाले एनीमिया सञ्चो हुन्।
एलोभेरा जुसको नियमित सेवन गर्नाले यी सबै विकार पदार्थ बाहिर निस्किने गर्छन् । दैनिक रूपमा एक गिलास एलो’भेरा जुस पिउनाले तौल घट्छ साथै यसको प्रयो’गले बारम्बार भो’क लाग्ने सम’स्याबाट समेत मुक्ति पाइन्छ । साथै, मधुमेह नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्छ । एलोभेराको जुसले दाँतको पहेलोपन पनि कम गर्छ । यसको दैनिक प्रयोगले दाँतमा हुने कि’टाणु नष्ट हुन्छ । सा’समा हुने दुर्गन्ध समेत यसले कम गर्छ ।
Prevतीतो तितेपातीका मिठा गुण, थाहा पाउनुहोस् किन खाने तितेपाती
Nextदिल तोड्न माहिर हुन्छन् यी ५ राशिका मानिस !
कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न विकल्प खोजिँदै